Kugeleza intiki, basola amagaraji akwaShell eMvoti Plaza – Bayede News
Kugeleza intiki, basola amagaraji akwaShell eMvoti Plaza
Uma uhamba emgwaqeni okhokhelwayo nonguthelawayeka uM4
Uma uhamba emgwaqeni okhokhelwayo nonguthelawayeka uM4 ulibhekise ngaphesheya koThukela lapho usudunusele iTheku, udlula emagaraji amabili kaphethroli akwaShell abhekene eMvoti Plaza. Lena yindawo edumile ngoba iningi labasebenzisa lo mgwaqo, le ndawo bayisebenzisela ukuzelula nokuphumula okulandelwa wuhambo olude. Ngesikhathi ulapha ngasesandleni sakho sesinxele, ubheke enyakatho, kwelinye lalawa magaraji amehlo akho akhangwa yizithabathaba zemizi kanokusho ongafunga ukuthi ngeyezinjinga ezihlala eMhlanga nakoBallito. Njengoba isiZulu sisho kwenye inkathi kayihlabi ngakumisa ngoba uthi ungasondela kule mizi wenganywe wukudumala. Lapha ubingelelwa yiphunga elingabekezeleleki omsuka walo kuyisitamkoko sendle egeleza emagcekeni emizi. Lolu wusizi olwembethwe ngumphakathi waboHlanga owakhe eThembeni, eGroutville ngaphansi koBukhosi bakwaDube.
ElaboHlanga lihambele kule ndawo nokuvele okushaqisayo ngempilo yansuku zonke. Ngaphandle kokubingelelwa yiphunga uzithela emapheleni asakhele isitamuko lesi naso esiphihlika indle. Ngokwamalungu omphakathi lesi simo asigcini nje ngokwehlisa isithunzi sawo kepha sekubheduke nezifo okubalwa ufuba notwayi. Kulabo abakhulume nelaboHlanga umunwe ukhombe inkampani uShell nabathe uzuza nje wona bona basotakwini lwezifo nokungcola. Baphinde basola le nkampani ngokubeka impilo nezakhiwo zabo ebungozini nabathe sekuke kwabehlela ngesikhathi kugqabuka umlilo endaweni. Ngesikhathi elaboHlanga lihambela kule ndawo lizibonele ezinye izindlu zisobishini njengoba amanzi nentiki bekuzigelezela nje kweminye ngaphakathi.
Okhulumela lo mphakathi uMnu uPatric Mbonambi uthi sebehambe kwaguga izicathulo bengqongqoza eminyangweni eyahlukene nasezinhlakeni zikaHulumeni becela usizo lokuba kungenelelwe esimweni abazithola bekuso.
“Isona simo-ke lesi esiphila ngaphansi kwaso kule ndawo yaseThembeni. Sekuphele iminyaka sikhala nasezinhlakeni ezahlukene zikaHulumeni sicela zingenelele ukunqanda le nkampani yakwaShell ekusibhubhiseni ngezifo ngenxa yalesi siphehli sendle sabo abasakhe eduze kwemizi yethu kodwa lutho ukuthola usizo,” kusho uMbonambi.
Uqhube wathi: “Kumanje iningi lethu ikakhulu izingane sihlaselwe izifo ezahlukene okubalwa kuzona ufuba notwayi okudalwa ukungcola okulethwa yimfucuza yesitamkoko esichithekela emizini yethu. Asisabuthi quthu nobuthongo sizenwaya ubusuku bonke ngenxa yokulunywa umzimba wonke. Ekhaya kuvalwe ngehlahla emndenini wami ngenxa yokhuvethe lotwayi olusikhungethe,” kuzikhalela uMbonambi.
Ebuzwa ukuthi yimiphi imnyango asebeke bangqongqoza kuyo ubale iKhomishini Yamalungelo Esintu, iHhovisi loMvikeli WoMphakathi kanye nezikhulu zikaMasipala Wesifunda Ilembe. ElaboHlanga linayo ikhophi yencwadi eyabhalwa izakhamuzi zakule ndawo ziyibhalela iHhovisi loMvikeli WoMphakathi ngowezi-2016.
“Saqala ngokubhalela iKhomishini Yamalungelo Esintu kodwa yanele yezwa nje ukuthi kanti kuthinteka lesi sikhondlakhondla senkampani yakwaShell abaphathi bakhona bathi ayingangabo asedlulele eHhovisi loMvikeli Womphakathi. Nalo iHhovisi loMvikeli WoMphakathi ngaleso sikhathi ebelisaphethwe nguAdv uThuli Madonsela izikhulu zakhona zivele zasichayisa njengoba zihambe ijuba likaNowa njengoba zingazange zisabuya nezimpendulo yize sasesenze nezitatimende,” kuqhuba uMbonambi.
Elinye ilungu lomphakathi uMnu uMoses Zikhali uhambe emagameni kaMbonambi wathi bafuna sisuswe lesi siphehli sendle esakhiwe eduze kwemizi yabo.